Humanity ihamba phambili intuthuko enkulu emkhakheni wezokwelapha, futhi konke sibonga ukuphrinta ngakuthathu. Muva nje, odokotela abahlinzayo, baqala ukusebenzisa yesimanje ephezulu ukucacisa 3D-amaphrinta afeze ukufakelwa ubuso. Ukufakelwa usebenzisa le ndlela kuyinto kakhulu olunembile futhi ephumelelayo. ukuphrinta Three-ntathu kwenza kube nokwenzeka ukuba sicabangele ngokuningiliziwe bonke ubuso ohlangothini front Yekhanda womuntu lokuphinda kamuva ngoba ubuso Ukufakelwa. Lokhu kukuvumela ukwenza ukuhlinzwa akuyona kuphela esinembile, kodwa futhi isheshe.
Ukusebenzisa amasu amasha
Le nqubo entsha isivele ngovivinyiwe iziguli ezimbalwa, kuhlanganise nalezo on elidumile uCarmen Tarleton, owayebizwa nezilima umyeni. Lezi imisebenzi sina ngcono izinga lempilo iziguli esikhathini esizayo. Bathuthela kusukela izimo ezihlasimulisa umzimba lapho abakwazi ukukhuluma kuphela, kodwa futhi kufanele uphefumule, inhlangano entsha, okuyinto kuhle walala skull yabo futhi manje ivumela ukuba bukhoma futhi umsebenzi ngokugcwele.
Ukuze iziguli welashelwa ukufakelwa ebusweni, avame lo msebenzi kusho ngokuphelele konke - kungcono ukuphela zobuhlungu nokuhlupheka kwabo, ekuqaleni ukuphila okugcwele. Ngokuvamile, uma isiguli isicelo ukufakelwa ubuso, wenzé mayelana amabili noma ngisho amathathu ukuhlinza ukuze asindise ukuphila kwakhe futhi ubuyisele imisebenzi ebalulekile. Lokhu kusho ukuthi isakhiwo thambo plate ebusweni kungaba ngezikulufo, ithambo grafts kanye inqwaba nezinye izakhi, ngalinye elikwazi okumelwe icatshangelwe. Ngaphambili, ukukwenza kwaba ngendlela emangalisayo nzima, kodwa manje ukunyatheliswa ngakuthathu kwenza kube nokwenzeka ukuba acabangele ngokuphelele yonke imininingwane emihle. Futhi lokhu, esikhundleni salokho, kakhulu ngesivinini ukusebenza, okuyinto vele kuthatha isilinganiso mayelana 25 amahora.
Ukuze uCarmen Tarleton ku iphrinta unhlangothi-ntathu eyayisinyathelisele izicubu zomzimba ezithambile entsha ebusweni bakhe, elabhujiswa cishe ngokuphelele lapho umyeni wakhe waphonsa yakhe ebusweni lwekhemikhali enamandla ukuthi avame ukusetshenziswa ekwenzeni insipho ukwenziwa. Ngenxa yalokho, owesifazane bazishisa zonke esikhumbeni futhi konke okwafunyanwa ngaphansi kwalo - kwakukhona ithambo nje oluze, zihambisana ungqimba ezondile nezicubu lokusinda. Phrinta izicubu zomzimba ezithambile entsha - kungcono inqubo emangalisayo eziyinkimbinkimbi, futhi kunzima ukucabanga ngaphandle iphrinta unhlangothi-ntathu, njengoba nje umuntu engathenga afeze ukufakelwa of cishe lonke elase-UBUSO bomuntu.
Ngemva othola ukuhlinzwa ebusweni bakhe Tarleton sekuphele iminyaka emithathu, ekugcineni wathatha izicubu impande, futhi manje usengummemezeli GCWELE ENGAMELA ubuso bakhe. Manje kunzima ukusho ukuthi kwaba etafuleni yokusebenza akuyona isikhumba sakho - ngakho-ke ubukeka zemvelo. Futhi, ezinye izicubu ziye zalondolozwa ukuze usetshenziselwe ukumodeliswa ebusweni uma uCarmen Tarleton kuzofuneka ukuthi ubheke Ochwepheshe.
Manje, ngaphambi kokuba kunyatheliswe ngakuthathu ngeke nje kugcine lonke ubuso, kodwa futhi kakhulu lula inqubo yokutakula komonakalo abantu ngamazinga ahlukene zaba namandla kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho kubhujiswa lesi odokotela abahlinzayo emhlathini ukuthatha ingxenye tibia, kodwa oyiyo akufani, ngakho-ke ngesinye isikhathi kunzima ukubuyisela ngokunembile emhlathini. Ngosizo ukuphrinta ngakuthathu, odokotela abahlinzayo manje bakwazi ukukhetha ubukhulu kanye ukuma kwamathambo ilungele ngamunye icala ngabanye. Uma sikubeka kalula, ukuphrinta ngakuthathu inikeza ithuba Amazing ngcono nokusheshisa leyo misebenzi. Kuwufanele ukukhokha vnmianie futhi yokuthi ngokuvamile wasebenzisa imiphetho, ngenxa yokuthi babengavumelani kulula kukhombisa, kodwa ngokushesha ubhujiswe. Manje iguqulwe hirurbiya ngokuphelele ithambo ethangeni, okuyinto isikhathi eside.
Plastic Surgeon Blohin Sergey Nikolaevich: nesineke Izibuyekezo
Kanjani ukuhlinzwa bariatric nempilo inhliziyo: umbono yesayensi
Uyini emaceleni ophahleni kusukela Foam
Amazwibela "Ngo ezingemuva langemuva." Tale Anatolia Alexina
Ikhekhe lesiponji i-sponge i-multivarquet: iresiphi, izici zokupheka nezibuyekezo
Dry Khwehlela Ukwelashwa amakhambi abantu